3 ihe ndị i kwesịrị iche echiche tupu ị ịzụta apple music gụgharia ọrụ
3 Ihe Ị Mkpa Chee echiche tupu ị zụrụ Apple Music gụgharia Service
. Atụmatụ maka ọrụ
. Apple gụgharia
. Atụmatụ maka Apple music
. Enwe Apple music
. Download ngwa
. Apple Music ọrụ
. Atụmatụ maka Ndenye aha
. Atụmatụ Apple Music egwuregwu
. Apple gbagwojuru Music
. Apple music n'ọbá akwụkwọ
. Ọkpụkpọ na ókè
. Family nkekọrịta
. Apple Music Nchekwa
. Apple Music ememme
Apple music gụgharia ọrụ pụrụ na-ahuta ka dị ọnụ ala music ọrụ mgbe ọ na-abịa kwa ọnwa fanye na ọ bụ n'ihi na eziokwu na Apple Inc. chọrọ ọrụ ahụ iji ọma dị ukwuu dị ka nke ọma. Iji nweta kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ ọ na-gwara iji jide n'aka na isi ihe ụfọdụ na-nyochaa tupu zụọ.
Ihe 1: M Kwesịrị Ịhọrọ apple music gụgharia ọrụ?
Ihe 2: Spotify ma ọ bụ apple music?
Ihe 3: Inweta free music ụzọ gị mkpa mara
E nwere ọtụtụ ihe ndị na-abịa n'okpuru a isi na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na onye ọ bụla na onye ọ bụla nke a na-abụghị nanị nyochaa ma ọ ga-mere na-eme ihe n'eziokwu ụzọ iji jide n'aka na ihe kasị mma e nyere ka onye ọrụ na nke a. Na-esonụ bụ ụfọdụ ihe ndị dị oké ọnụ ahịa banyere na nke a na-enweta ọrụ na nke kacha mma na ọkaibe results:
Gịnị ọrụ apple music na-agụnye?
Ọ bụ ndị mbụ na ndị isi na-ekwu. The Apple music gụgharia ọrụ na-agụnye 3 ọnwa ikpe redio, a bitrates nke 256 kbps, Ọbá akwụkwọ size nke 30MB, 25K songs mkpuchi, Siri njikwa na gafere 1 atụmatụ na e gụnyere na nke a. Ọ na-akwado YouTube videos enweghị ihe ọ bụla mgbasa ozi ahụ bụ ihe kasị mma na e agbakwunyere n'ime ya.
The price maka apple music ọrụ
The price nke Apple music ọrụ ka e kwuru tupu bụ nnọọ ọnụ ala na okwu nke dollar na a ahịa kwesịrị na-emefu na ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na price na-jiri ya tụnyere ihe ndị ọzọ ọrụ na o wee na-n'okpuru echiche. Mgbe ọ na-abịa na ọrụ ahụ, na metụtara price mgbe ahụ, ọ bụ na--ahụ kwuru na kwa ọnwa-elekọta bụ $9.99 na a 6 so ezinụlọ mkpọ nakwa na e ẹkenam nke efu $14.99 kwa ọnwa ka onye ọrụ nke dịkwa nnọọ echekwa ka tụnyere ndị ọzọ ọrụ na-arụ ọrụ na ahịa.
1. Ọ nwere ihe android ngwa nakwa nke na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi cross n'elu ikpo okwu.
2. The adọga egwú nwere ike ime ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na nke a site na-ebugote music na e kere na-chọpụtara.
3. A atọ n'ọnwa free nzọ ụkwụ na-eme ka o kwe omume n'ihi na onye ọrụ ikpebi ihe kwesịrị ka a mere mgbe oge a na nsọtụ.
1. The Apple gụgharia ọrụ adịghị ekwe ka onye ọrụ iji nweta dum katalọgụ nke iTunes ad kama ọ na-enye ohere 30 M songs naanị.
2. The tinye akwado nhọrọ na-adịghị n'ebe na-akwado music na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na a onye ọrụ nwere ike ụtọ curated redio ụgbọ ma na DJ si.
3. The ngwaọrụ nkwado bụ nnọọ ụkọ na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ bụ ike nanị ịnweta android na iOS ngwaọrụ. N'adịghị ka ndị ọzọ nyiwe nke na-enye multidimensional nkwado.
Na-esonụ bụ ihe ndị a ga-atụle nke a:
1. Apple nwere mma music chọpụtara
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma atụmatụ na-eme ka Apple gụgharia ọrụ nnọọ mma karịa Spotify ma ọ pụtaghị na Apple akarịala Spotify na akụkụ nile dị ka e nwere akụkụ ụfọdụ ebe Spotify karịrị Apple na-akwanyere atụmatụ:
2. Ndetuta egwu ọkpụkpọ dị mma na Spotify
Ọ bụ eziokwu a na-apụghị ileghara anya mgbe ọ bụla na-eri na onye ọrụ nwere ike nweta ihe kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ na nke a mgbe ọ na-abịa Spotify music anatara dị ka ha na-collaborative na ndị ọzọ ndị mmadụ listi ọkpụkpọ na ala na dị ka kwa ọchịchọ :
3. Spotify ngwa weebụ bụ ikenyeneke mbiet
Ọ bụ ọzọ a eziokwu na naanị ike kọwara site onye ọrụ ndị nwere abụghị naanị na-eji ngwa weebụ ma nwekwara a ụtọ ma ọ bụrụ na a egwu tech ibe. Ọ na-gwara iji jide n'aka na Spotify ngwa bụ na-ebudatara maka desktọọpụ ka tụnyere Apple nke anya ike ike ruru iTunes:
4. The n'ọbá akwụkwọ echiche tụnyere
Ọ bụ nnọọ ike ọrụ ịrụ. Eziokwu nke okwu ahụ bụ na ọbá akwụkwọ echiche nke Spotify bụ n'ebe iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe na-arụpụta mgbe ọ na-abịa nhọrọ na na aka nke ọzọ na Apple n'ọbá akwụkwọ echiche na-eme ka n'aka na onye ọrụ bụ ike inweta ihe kasị mma visual ngosipụta na nke a:
5. Artists peeji nke
Ha anya ọma na-enye ihe ọmụma ọmụma banyere tracks na-egwuri nke pụtara na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na nke a. Nọmba ọnụ tinyere onye na-ese bio bụkwa ụfọdụ ọmụma a na-site Spotify na nke a na-enye onu n'elu Apple ọzọ, sị:
6. Album echiche
Ebe a bụ ihe ọzọ na-eme ka Apple ịka Spotify ka album anya nke Apple anyị nnọọ mma karịa Spotify:
TunesGo bụ Wondershare mmepe na e mere iji jide n'aka na ala nke nkà ọrụ-nyere niile iOS ndị ọrụ chọrọ inwe free na ọkaibe ọrụ na mmekọrita free music download. Ọ bụ ịrụ ụka adịghị a ijuanya na e mere site Wondershare na maka otu ihe ahụ ọ na-e gosiri elu site ọrụ na nke a.
Wondershare TunesGo - Download, Nyefee na jikwaa gị music n'ihi na gị iOS / Android Devices
Na-akwado 1000+ Sites ibudata
Nyefee Music n'etiti ọ bụla na ngwaọrụ
Complete Niile Music Library
Nduzi n'ihi na TunesGo:
5.Tips maka iTunes
Download gụgharia music ka mp3 free na TunesGo
Get nkọwa ndị ọzọ >>
Dọwara Music si iPhone on Mac
Best Ụzọ na-ege ntị Spotify Music Free na-enweghị Spotify Mgbasa ozi
Top 10 Nkiri dere na ha Famous Oge gboo music
Olee otú Download Music Album Free
Olee otú iji hazie Music on Android Ngwaọrụ
Olee otú Tinye Music ka PowerPoint
> Resource> Music> 3 Ihe Ị Mkpa Chee echiche tupu ị zụrụ Apple Music gụgharia Service